Tim Cook ayaa u Diiday WSJ ujeedka safarka Jony Ive | Wararka IPhone
Tim Cook ayaa beeniyay WSJ sababihii uu u baxay Jony Ive
Jony Ive ayaa maalmahan caan ku ahaa, Naqshadeeyaha warbaahinta Apple, Steve Jobs oo ahaa gacanta midig ee waqtigiisii, wuxuu ka tegey shirkadda Cupertino wuxuuna u dhaqaaqay sameysashada shirkad isaga u gaar ah, taas oo si xiise leh u sii wadi doonta la shaqeynta Apple. Waqtigan xaadirka ah mabnuucida fikradaha ku saabsan sababaha bixitaankooda ayaa la furay.
Jariidada Mareykanka ee The Wall Street Journal ayaa daabacday maqaal aad u dheer oo sheeganaya in sababaha bixitaankiisa ay ku saleysan yihiin inta badan xiisaha yar ee Tim Cook u gelinayo naqshadeynta wax soo saarka iyo khilaafaadka mararka qaar ka yimaada hoggaanka fulinta Apple. Si kastaba ha noqotee, Maamulaha guud ee Apple wuxuu si dhakhso leh u yimid inuu beeniyo WSJ oo uu meesha ka saaro fikradihiisa ku saabsan ka bixitaanka Jony Ive inuu yahay wax aan macquul ahayn.
Dhaxalka Jony Ive ee Apple: Guulihiisii ​​weynaa iyo Guul darrooyinkiisii
Tim Cook wuxuu soo diray weriyaha NBC Dylan Byrers, emayl uu ku muujinayo sida uusan ugu qanacsanayn fikradahan:
Sheekadu waa caqli xumo. Qaar badan oo ka mid ah fikradahaaga iyo gabagabadaada ma waafaqayaan xaqiiqda. Asal ahaan kama warqabaan sida kooxda naqshadeynta u shaqeyso iyo sida Apple u shaqeyso. Kaliya kuma aqoonsanin shirkadda sharraxaaddooda go'aannadayada, dhacdooyinka, iyo xiriirka aan la leenahay shaqaalaha.
Kooxda nashqadeynta ayaa runtii karti badan. Sida Jony u yidhi, way ka xoog badan yihiin weligood (…) Waan ognahay runta waana ognahay waxyaabaha cajiibka ah ee ay awoodaan. Mashaariicda aan ka shaqeyneyno ayaa maskaxdaada mar kale qarxin doonta.
Sida ay wax u kala horeeyaan Tim Cook wuu ka cadahay biyaha, in yar oo maamuleyaal ah darajadiisuna waxay awoodaan inay sida ugu dhaqsaha badan wax uga qabtaan arintaan oo kale, dhab ahaantii badankood waxay dooran lahaayeen inaysan si toos ah wax u dhihin, yaa been sheegaya, WSJ ama Tim Cook?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Tim Cook ayaa beeniyay WSJ sababihii uu u baxay Jony Ive
Apple waxay dooran kartaa TouchID shaashadda Shiinaha
Deegaanka, asturnaanta iyo amniga: 3da ogeysiis ee cusub ee Apple